Location: musha » Kutumira » Quick News » COVID Denda Rinotungamira Kuvhiringa Matengo eHotera
Vatengi vari muUK maonero, pamusoro pekuwana chiyero chepamusoro, chanyanya kuvhiringika pamusoro pedenda, sekureva kweHotera Guest Survey kubva kuBVA BDRC.
Chirevo chakawana kuti kuve nhengo yezvirongwa zvekuvimbika kwaisafarira mhando dzemahotera, nemaOTAs achiunganidzawo nhengo, zvichiratidza kuti paidiwa imwe nzira yekukwevera vashanyi kuti vatungamire mabhuku.
Maonero evatengi ekuti angawana kupi mwero wakanakisa akafarira maOTA, pa33% yevakapindura, nemawebhusaiti ehotera ari kumashure pa27%, kunyangwe sarudzo dzese dzadonha mumakore matatu apfuura, kubva pa41% ne28% zvichiteerana. Huwandu hwevafambi vaisaziva hwakapetwa kaviri panguva iyi, zvichiratidza kuvhiringidzika pamusika.
James Bland, director, BVA BDRC, akati: “Macheni emahotera epasi rose anga achivaka zvirongwa zvavo zvenguva nenguva nechinangwa chekutyaira zvakanangana nekurongedzerwa uye kuderedza mutengo wekuzadza mibhedha yevaridzi vawo.
"Denda iri raireva kudonha nekukurumidza kwehuwandu hwevafambi vemakambani, avo vanoumba ruzhinji rwenhengo dzechirongwa chefrequency. Nemusika uchinyanya kutsamira pavafambi vekutandara, cheni dzaifanira kusendamira kune dzimwe nzira kuti dziunze vaenzi uye, kana nzendo dzichivhurwa, dzinofanirwa kudyidzana nevatengi kuti vaderedze mutengo wekutenga. "
Panyaya yezviteshi zvekuhodha, 59% yevafambi vebhizinesi vakasarudza nzvimbo dzemhando dzehotera, nepo, pakubhuroka kwekutandara, 56% yaifarira mamwe ese masaiti. Zvemachanera ekubhukha. booking.com ndiyo yakashanyirwa zvakanyanya, iine 56% yevafambi vakaitarisa kana kuishandisa, ine muridzi wePremier Inn, Whitbread akashanyirwa zvakanyanya pamasaiti ane mazita ehotera, ari wechipfumbamwe pachirongwa chechiteshi.
Sezvingareva izvi, Premier Inn yakabata mukana wemhando uye chinzvimbo chemhando, ichiteverwa neHilton Hotels & Resorts, kozoti Holiday Inn.
Panyaya yekuziva netier, Premier Inn iri pachinzvimbo chepamusoro-soro pamahotera ehupfumi, ine Holiday Inn inotungamira musika wepakati, Hilton Hotels & Resorts iyo yepamusoro yakazara sevhisi uye Ritz Carlton muLuxury. Yemhando yekugara pamba, Airbnb yakatungamira munda neimwe nzira.
Tichitaura nezvezvirongwa zvekuvimbika, 40% yevose vakabvunzwa vaiva nhengo dzechirongwa chimwe chete, zvichikwira kusvika ku64% yevafambi vebhizimisi. Makumi mashanu neina muzana eGeneration Y vakapindura vakabata nhengo. Hilton Honours ndiyo yaive yakanyanya kufarirwa chirongwa, ichiverenga 23% yevakapindura, ine zvirongwa zveOTA - Expedia uye hotels.com - inotevera muzvikamu.
Kukwezva kwemusika wepamba weUK kune vafambi vekuzvivaraidza kwaramba kwakasimba, ne80% yevaenzi vekutandara vatove vakabhuka pekugara, kana kuti vangangodaro, nekupwanya kweguta sarudzo inonyanya kufarirwa. Kudzvinyirirwa kwemitengo kuri kunzwiwa nemutengi kwaivewo chinhu, nekukosha kwemari yekutyaira sarudzo dzekubhuroka.
Bland akati: "Vatengi vari kugadzikana nepfungwa yekubhuroka zororo repasirese, asi isu tiri kuona mashizha akasvibira ekufamba kunze, kanenge kaviri vanhu vakuru vakarodha zororo reUK muna Ndira - chiitiko chepamusoro kubva pakatanga kurondwa. .
"Nyaradzo nepfungwa yekugara mumahotera nedzimwe mhando dzepekugara dzakabhadharwa dzakasvetuka zvakanyanya sezvo kutya kwaitungamirwa neOmicron kwadzikira uye chikamu chekugara chiri kuvharika pane pre-denda maererano nemazinga ekunyaradza kwevatengi.
"Chasara kuoneka ndechekuti kupora uku kuchaenderera mberi here, kana kuti inguva yekupedzisira dambudziko rekudhura rekurarama risati ratanga kuruma. Sezvatakaona kubva muongororo yedu, kukosha mutyairi wevatengi uye pane zvimwe zvinhu zviri kunanga kwatiri, zvinosanganisira kuwedzera kwemutengo wesimba uye zvinogona kukanganisa hupfumi muhondo yaPutin kuUkraine. "
Musika wekutandara wepamba wakatonga chikamu panguva yedenda, neavhareji yenzendo dzekuzorora dzinosvika mazana matatu nesere dzakatorwa mumakore maviri apfuura, vachipesana nenzendo dzebhizinesi repamba 3.8. Mhenderekedzo yemahombekombe uye yekutandarira yaive yakakurumbira, sezvo mamwe ekunze ekunze aive asipo.
Chidzidzo cheBVA BDRC chakawana kuti kuvimba mukufamba kwaikura, ne47% yevatengi veUK vachifara kubhuka rwendo rwepamba rwunozotorwa mumwedzi mishoma uye 32% kuenda ikozvino. Sezvo vaenzi vave kugadzikana nekugara mumahotera, vatangawo kudzokera kumaguta. Tichitarisa chinangwa chenguva yemberi kwemwedzi ye12 inotevera, 47% vakanga vachironga kuzorora kweguta, asi 34% vaida kushanyira nzvimbo yemunharaunda kana kukwezva uye 32% vaida kushanyira shamwari kana hama.
Bland akati: “Vakawanda muchikamu chacho vaifunga kuti, kana kufamba kwenyika dzakawanda kwangova kwechokwadi, vatengi vaizodzokera kumaitiro ekare vodzokera pakutsvaka kwavo zuva rechirimo. Panzvimbo iyoyo isu tinogona kuona kuti musika wepamba wapfuura denda uye, nekuwedzera kushushikana pamusoro pemutengo uye kukanganisa kwekufamba mukushanduka kwemamiriro ekunze, zvinogona kuramba zvichiwedzera.
"Kuti varambe vachikwezva vashanyi, mahotera anofanirwa kuonga kuti haachave nemusika wenhapwa, asi anofanira kukwikwidza, kana zvisiri pamamiriro ekunze, ipapo kukosha uye ruzivo, sezvo vatengi vachitarisira kushandisa zvakanyanya nguva yavo nemari."
Airbnb Expedia Holiday Inn hotera Inn